Imoto yezinyawo zemoto ifektri, abahlinzeki - China Imoto Izinyawo Abakhiqizi
Ihlala isikhathi eside futhi ivikela i-TPE Car Foot Mats enombala omnyama
Omata bezinyawo zeBensen's TPE abanabuthi, abanaphunga, ne-FDA, okwenza kube umkhiqizo ophephe ngokuphelele kubathengi ukuze baqiniseke.
IBensen Custom Fit Floor Mats 2 Row Liner Set Black
Omata benyawo be-TPE abenziwe yiBensen benziwe ngokwezifiso zemodeli oyinikezayo, futhi ngeke ihlanganise ukubhuleka kwegesi, njll., Kunciphisa ubungozi bezokuphepha obuhambisana namata ezinyawo zemoto.
I-Good Quality TPE Car Floor Mats yezimoto
I-TPV imodeli yokuvikelwa kwemvelo yokusetshenziswa kwemoto unyawo idlule esigunyazweni esikhulu kunazo zonke se-EU SGS inkampani ROHS10, isitifiketi se-formaldehyde. Ngakho-ke lapho beshayela imoto endaweni encane yokushayela, umthengi angajabulela okungenabuthi okunephunga, ikhwalithi ephezulu, indawo entofontofo.
I-TPE Yonke Isimo Sezulu Esiphansi Semoto Amanothi Emoto Yezinyawo
I-TPE Floor Mats eyenziwe ngokwezifiso ye-Auto Interior
I-China Factory Direct Sale TPE Car Foot Mats enentengo enhle
UBensen wenza i-premium protection-waterproof TPE (thermoplastic elastomer) irabha enomngcele ophakeme osiza ukuvimbela iqhwa, amanzi, usawoti, isihlabathi nodaka ekungcoleni okhaphethi bezimoto. Irabha le-TPE liyamelana nesimo sezulu futhi lisebenza kahle kunoma yisiphi isimo sezulu, noma kubanda kakhulu.
Ikhwalithi ephezulu ye-TPE Car Foot Mats enentengo yeFektri
Umkhiqizo we-Anti-skid Car Mat nge-TPE Material